Chipiri, July 5, 2016 David McIninch
Munguva yekuchinja kwemaindasitiri vanhu vakaita sezvikamu zvemuchina, zvakamiswa pamwe chete nemitsetse yegungano, kuyedza kuzviita kuti vashande semuchina sezvinobvira. Sezvo isu tichipinda mune izvo zvava kunzi "4th Industrial Revolution" takazobvuma kuti michina iri nani pakuita michina pane vanhu. Munyika ino mhanya-mhanya yekutsvaga kushambadzira, uko mamaneja emushandirapamwe anoenzanisira nguva yavo pakati pekugadzira kuvaka mushandirapamwe, uye nekugadzirisa mashandiro nekuvandudza iwo pa
Kukura Kwevanhu-Yakavakirwa Kushambadzira uye Kushambadzira
Muvhuro, April 25, 2016 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Mune yavo whitepaper pane People-Yakavakirwa Kushambadzira, Atlas inopa anonakidza manhamba nezve vanhu-based kushambadzira uye kushambadzira. Ndichiri kushandisa yakawanda nguva pane nharembozha, 25% yevanhu vanoshandisa matatu kana akawanda maturusi pazuva, uye 3% yevanhu vanoshandura michina kuti vapedze chiitiko Chii chinonzi People-Based Marketing? Zvimwe zvekushandisa uye mapuratifomu zvinopa vashambadziri kugona kurodha tarisiro kana yevatengi zvinyorwa zvekufananidza vashandisi pakati pezviviri. Rondedzero dzinogona kuiswa uye kuenzaniswa kune vashandisi
Iko Kushambadzira Kukanganisa kweKutanga-Bato maringe neTatu-Bato Dhata
Chipiri, June 23, 2015 Douglas Karr
Kunyangwe hazvo vanoitisa data-vanofambiswa nevashambadzi kuvimba nhoroondo yechitatu-bato dhata, chidzidzo chitsva chakaburitswa neEconsultancy neSignal chinoratidza shanduko muindastiri. Chidzidzo ichi chakawana kuti 81% yevatengesi vanotaura kuti vanowana iyo yepamusoro ROI kubva kune avo dhizaini-inotungamirwa nzira pavanoshandisa yekutanga-bato dhata (zvichienzaniswa ne71% yevezera ravo mune yepakati) iine 61% chete inotaura yechitatu bato dhata. Iyi shanduko inotarisirwa kudzika, iine 82% yevashambadzi vese vakaongororwa kuronga kuwedzera kwavo
Chipiri, Gunyana 28, 2014 Svondo, October 26, 2014 Douglas Karr
Iko Kuchinja muna 2014 Kushambadzira Mabhajeti
Chipiri, February 18, 2014 Douglas Karr
Econsultancy yakaburitsa yavo Yekushambadzira Budget 2014 Report mukubatana neMhinduro. Ivo vakapa iyi yakazara infographic pamhedzisiro yedata rekuongorora. Vatengesi (60%) vangangodaro vari kuwedzera mabhajeti avo ezvekushambadzira zvegore rinouya kupfuura chero nguva kubva pakatangwa Ripoti ravo rekutanga reBhajeti reKushambadzira panguva yekukwira kwedambudziko rehupfumi. Anopfuura makambani mazana matanhatu (kunyanya UK), akapinda mutsvakiridzo iyi, iyo yakatora chimiro che
Chinyorwa chekutanga chegwaro raSoDA ra2013 rava kusvika zvino zana nemakumi mashanu ezviuru zvekuona nekutora! Chikamu chechipiri chebhuku chave kugadzirira kutariswa. Ichi chinyorwa chinosanganisira musanganiswa unonakidza wezvidimbu zvehutungamiriri, nzwisiso inobvunzurudza uye basa rechokwadi rakagadzirirwa zvigadzirwa zvemhando yepamusoro seNike, Burberry, Adobe, Whole Foods, KLM neGoogle. Vabatsiri vanosanganisira vanozivikanwa vashanyi vanyori kubva kubhuruu-chip zvigadzirwa, masheni uye matsva ekutanga-kumusoro, pamwe nemwenje kubva kuSoDA